Waa'ee Irraantotaa fi Jalaantotaa
Olaantoof jalaantoon bakka gubbee fi jaleen mudanaa fuulaati, iddoo itti barruu ykn saxaatoo itti galchuu dandeessu dha.Olaantotnif jalaantoonni akkaataalee fuulaa ammeetti kan dabalamani dha.Fuulli kammiyyuu kan akkaataalee wal fakkaataa fayyadamu Olaantoo fi jalaantoo isa itti dabaluun keesse ofumaan fudhata Dirreewwan keessa, kan akka lakkoofsota fuulaa fi mata dureewwan boqoonnaa, olaantoo fi gadaantoo barruu galmee keessatti saaguu dandessa.
Akkaataaleen fuulaa fuulaa ammeef Kabala Haalojii keessatti agarsiifama.
Akkasumas Dhangi'i - Fuulaa filuu dandeessa, caancalaIrraantoo ykn Jalaantoo keessa cuqaasiitii Olaantoo Banaa or Jalaantoo banaa filadhu. Yoo fuuloota qaraa fi guutuuf olaantoo fi gadaantoo gara biraa ramaduu barbaadde, sanduuqa filannooQabiyyee wal fakkaataa bitaa/mirgaa haqi.
Galmee kee keessatti olaantoowwan ykn gadaantoowwan gara biraa fayyadamuuf, dirqiin Akkaataalee Fuulaa gara biraatti dabaluu qabda, itti aansuun akkaataalee gara fuuloota iddoo itti olaantoota fi jalaantoota agarsiisuu barbaaddu fayyadami.
Galmee HTML keessatti olaantoota fi jalaantoota
Akkasumas gariin dirqalaalee olaantoo fi jalaantoo galmeewwan HTML keessatti ni argamu. Olaantootni fi jalaantootni HTMLdhaan hin degaramu fi isa irra iyyaatoowwan addaa fayyadamun alergama, kanan booda sakkata'ii keesatti arguu dandeessa.Yoo teessuma halaata saphaphuu keessatti hojii eegalsiifte,olaantootni fi jalaantootni galmeewwan HTML qofan alergama. Yommuu galmee LibreOffice keessaa dabalbantu, olaantootni fi jalaantootni sirriin , dirreewwan kamiyyuu saagdee dabalachuun agarsiifamu.
Fuula Ammaa irratti Hundaa'uun Akkaataa Fuula uumuu
Olaantoota fi Jalaantoota Gara Garaa Hiikuun
Maqaa fi Lakkoofsa Boqoonnaa olaantoo ykn Gadaantoo Keessaatti Saaguun
Jalaantota ykn olaantota Dhangeessuu
Title is: Waa'ee Irraantotaa fi Jalaantotaa